China kechioma achara Dracaena Tower achara Layer achara Pagoda ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Lucky achara Dracaena Tower achara Layer achara Pagoda
Achara obi ụtọ na-egosipụta ntoju nke akụ na ụba, udo na ọganihu. Achọpụtaghị ịma mma nke achara na-atọ ụtọ na aha auspicious. O nwere akwukwo di nkpa, emerald na acha odo odo, nkpuru ya na-egosiputa ihe ndi mara nma dika achara, ma ha abughi ezigbo achara. Enwere ngọzi na China na "okooko osisi na-eto eto maka ọganihu, na achara na-akwụghachi nchekwa". N’ihi na osisi na ahịhịa ya na-atọ ụtọ, achara mara mma, ma baa ọgaranya na rhyme, ha na-ewu ewu nke ukwuu n’etiti ndị mmadụ.
Achara obi ụtọ na-eto eto, ike, mmeputakwa, ma dịkwa mfe ijikwa. Dabere na njirimara ndị a, a na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọhụrụ bamboo egbutu ọtụtụ osisi nke ogologo dị iche iche iji mepụta pagoda. Isi nke elu nke azuokokoosisi ọ bụla ga-adị na ome achara, a na-ejigidekwa mkpụrụ osisi ahụ iji mee akwa ọ bụla nke pagoda. N'elu osisi ahụ nwere ike ito ma too alaka na epupụta, na-eme pagoda ọhụrụ.
The metụtara mbukota ọmụma dị ka n'okpuru:
Towerlọ elu Bamboo Lucky Nha nke foamed igbe (cm) Ọnụ ọgụgụ dị na igbe ọ bụla (PC) Gross ibu kwa igbe (kgs) Ogo nke ụlọ achara (cm)
2 oyi akwa - obere 60x45x22 40 9.5 7 × 11
2 oyi akwa-nnukwu 60x45x25 30 18 10 × 15
3 oyi akwa-obere 60x45x28 24 10 7x11x15
3 oyi akwa-nnukwu 60x45x33 15 10 10x 15x20
4 oyi akwa-obere 60x45x33 12 11 7x11x15x19
4 oyi akwa-nnukwu 60x45x38 12 15 10x15x20x25
5 oyi akwa-obere 60x45x35 10 11 7x11x15x19x23
5 oyi akwa-nnukwu 60x45x42 6 13 10x15x20x25x30
Mmadụ Bịa na-ajụ m ọzọ size ọmụma.
Port nke Loading: Zhanjiang, China
Gbanyụọ epupụta na ala na mbido iji gbochie uto nke achara n'onwe ya. Ọnọdụ a kapịrị ọnụ dabere nha karama ahụ. Kpachara anya bepụ epupụta n'okpuru karama ọnụ. Ọzọkwa, bipu obere ngalaba na ala nke mgbọrọgwụ obliquely. Lezienụ anya na ịkpụcha nke ọma, ka achara nwee ike ịmịkọrọ mmiri nke ọma.
Ihe etinyere etinyere: N’ihi ọdịdị ya mara mma, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka osisi ornamental ma ọ bụ nwee uru dị elu.
Mee ka ikuku dị ọcha: achara bara ọgaranya nwere ike ime ka ikuku dị ọcha nke ime ụlọ.
Nke gara aga: Golden Barrel kaktus Echinocactus Grusonii Hildm
Osote: Nnennen kechioma achara Dracaena Sanderiana Kwụ Ọtọ
Lotus Obi ụtọ achara
Etu gburugburu Bamboo